हिलोमा रातो कार्पेटपछि सामाजिक सञ्जालमा जे देखियो « Janata Samachar
हिलोमा रातो कार्पेटपछि सामाजिक सञ्जालमा जे देखियो
काठमाडौं । बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६० औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भयो । वार्षिकोत्सवको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओली कीर्तिपुर पुग्नुभयो ।
बिहानैदेखिको वर्षाले राजधानीका अधिकांश स्थान हिलो र भिजेका थिए । यस्तै क्रममा प्रधानमन्त्री ओली पुगेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रमा पनि हिलो त हुने नै भइहाल्यो । वार्षिकोत्सवमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्न त्यहाँ रातो कार्पेट बिच्छ्याइएको थियो ।
तर विडम्बना रातो कार्पेटमुनि सग्लो जमिन थिएन । रातो कार्पेट मुनिको जमिनत हिलाम्य थियो । सम्मानको लागि हिलोमै ओछ्याइएको रातो कार्पेटमा प्रधानमन्त्री हिडेँको तस्बिरले अहिले सामाजिक सञ्जालमा खुब चर्चा पाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ‌ओलीकाे तस्बिर सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा पक्ष र विपक्षमा तर्कहरु देखिन थालेका छन् । कतिपयले सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य गर्दै प्रधानमन्त्री ओली समृद्धि र समाजवादतर्फ उन्मुख भएको टिप्पणी गरेको छन् । यस्तै अर्काथरीले भने प्रधानमन्त्रीकाे पक्षमा त्यहाँ कसरी जानुपर्ने भन्दै तर्क गरेका छन् ।
हेलिकप्टरमा उडेर जानु पर्ने हाे की
घुडा सम्म गाडिएर हिड्नु पर्ने हाे कि
तिमिले बुहि बाेकेर तारिदिन्थाैकि
देशकाे सबै ठाउमा हिलाे मैलाे हराएकाे भए तिमि कस्काे केखान राजनिति गर्छु भन्छाै
हिलाे नभइ पिच बाटाे भएत त्याे थाेत्राे कार्पेट हाल्ने चलन छ अाज भाेलि ।
— mpahari (@mmpahari) July 10, 2019
समाचारमा आएका तस्बिरहरु फेक भएको भन्दै बास्तविक तस्बिर अर्कै भएको बताएका छन् । बास्तबिक तस्बिर भनी राखिएको तस्बिरलाई फोटोसप गरेर हिलो भएको ठाउँमा घाँस उम्रेको देखाइएको छ ।
वास्तविकता : पहिलो तस्विर
भ्रम फैलाउन फोटोसप गरिएको दोस्रो तस्विर !? pic.twitter.com/4A85d32H6u
— Govinda Baniya ?? (@DearGovin) July 10, 2019
हिलाे बाटाेमाथी राताे कार्पेट, त्यसमाथि समृद्धिकाे यात्रामा प्रधानमन्त्री । pic.twitter.com/Khd41hX9vj
— Brabim Kumar (@brabimkumar) July 10, 2019
हिलोमा रातो कार्पेट